वैदिक कथा : देवराज इन्द्र किन ठगिए ? access_timeजेठ १, २०७९
नीतिशास्त्र भन्छ शुभकार्य गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन र साइत पर्खनु पनि राम्रो होइन । यस्ता कार्य सकेसम्म भोलि गर्छु भनिएको भए आजै गर्नुपर्छ, भरे गर्छु भनिएको भए अहिले नै गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कसलाई थाहा भरे र भोलि आउँछ कि आउँदैन भनेर । पहिलो कुरा मन यति चञ्चल छ कि कति बेला...
प्रेरक प्रसङ्ग : यसरी प्रसिद्धि पाएका थिए तेनालीरामले access_timeबैशाख २३, २०७९
तेनालीराम लिङ्गाचार्यको नाम भाइबहिनीहरूले पनि सुनेको हुनुपर्छ तर उनी को थिए र किन विश्वप्रसिद्ध भए भन्ने कुरा भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । सोह्रौँ शताब्दीको सुरुतिर दक्षिण भारतको थुमलुरु गाउँको तेलगु ब्राह्मण परिवारमा जन्मेका तेनालीरामको वास्तविक नाम रामकृष्ण शर्मा थिय...
वैदिक कथा : किन मारिए शम्बरहरू ? access_timeबैशाख १३, २०७९
वेदमा एउटा कथा छ । प्राचिनकालमा नर्य, यदु, तुर्वीति र तुर्वस नामका राजा थिए । उनीहरूका पार्थिव शरीर र राज्य अलग अलग भए पनि मन, वचन र विचार एउटै थियो । एउटै विचार लिएर हिँड्थे एउटै नीतिले राज्य सञ्चालन गर्थे । उनीहरू धार्मिक थिए, धर्मपूर्वक शासन गर्थे, जसले गर्दा उनीह...
कश्यपको कथा : यसरी खोलिदियो उखुको फलले राजाको आँखा access_timeबैशाख १०, २०७९
एकादेशमा मकरध्वज नामका राजा थिए । उनको नाम जति राम्रो थियो स्वभाव ठीक विपरीत । सनकाहा थिए, जे मन लाग्यो त्यही गर्थे, गर्न लगाउँथे । उनको व्यवहारबाट दरबारमा सबै हैरान थिए । राजाको अगाडि बाबाको दुहाई, कसको के लाग्ने । राजाले भनेपछि गर्नैप&yen;यो, नसके पनि गरेज...
प्रेरक प्रसङ्ग : बालक ऐतरेयको विद्वता access_timeबैशाख ८, २०७९
ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण गन्थको वैदिक साहित्यमा उच्चतम स्थान छ । आत्मा र परामात्मा तथा जीवन र जगतलाई राम्ररी बुझाउन सक्ने यस ग्रन्थमा ४० अध्याय छ । यसै ग्रन्थको आरण्यक भागका केही अध्यायलाई ऐतरेयोपनिषद् भनिन्छ तर त्यही ग्रन्थका लेखक ऐतरेय भने सानामा मन्द बुद्धिका थिए । उनका बाबु...
वैदिक कथा : सरमाको शिक्षा access_timeबैशाख २, २०७९
सुर र असुरहरूका नाम भाइबहिनीहरूले पनि सुनेको हुनुपर्छ । वैदिक सनातन संस्कृतिमा दुई सम्प्रदाय छन्, जसमा सुर र असुर पर्छन् । यीमध्ये सुर सम्प्रदायमा देवताहरू पर्छन् भने असुर सम्प्रदायमा दानवहरू । कश्यप्रजापतिका अदिती नामक पत्नीबाट देवताहरूको जन्म भएको थियो । अर्की पत्नी दित...
अहङ्कारबाट जोगिने तरिका access_timeबैशाख १, २०७९
मानव जीवनमा ६ वटा प्राकृतिक गुण हुन्छन्, जसलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य भनिन्छ । केही दर्शन तथा दार्शनिकहरूले खासगरी वैदिक दर्शनले तिनलाई शत्रु भनेको छ तर ती आफैँमा शत्रु भने होइनन् । हो, प्रयोग गर्न नजान्दा भने नोक्सान गर्न सक्छन् । यसैका आधारमा शत्रु भन्ने हो भ...
प्रेरक भनाइ : बाबुआमाको सेवाभन्दा ठूलो धर्म अर्को हुँदैन access_timeचैत २६, २०७८
१, बाबुआमाको सेवा र आज्ञा पालनभन्दा ठूलो धर्म अर्को हुँदैन । बरू सकिन्न र भ्याइन्न भने तीर्थ, ब्रत तथा यज्ञअनुष्ठान नगरे पनि हुन्छ तर बाबुआमाको सेवा भने गर्नै पर्छ । किनकि यी बिना ती सब निरर्थक हुन्छन् । महर्षि वाल्मीकि २, सानो कुरामा पनि इमान्दार हुन सक्नुपर्छ, सि...
किन निराश भए गिद्धहरू ? access_timeचैत २३, २०७८
कथा निकै पुरानो हो । कुनै जङ्गलमा एउटा अजङ्गको सिंह बस्थ्यो । ऊ शरीरिकरूपमा जति ठूलो थियो घमण्डी र अहङ्कारी पनि त्यति नै थियो । सिंहहरू यसै पनि बलिया र अहङ्कारी हुन्छन् । यसैका आधारमा उनीहरूका जीवन चलेका हुन्छन्, चलाएका हुन्छन् । त्यसमा पनि ऊ बढी नै बलियो र अहङकारी थ...
कसरी बचाउँथे वैदिक महर्षिहरू मरेका मानिसलाई ? access_timeचैत २१, २०७८
परापूर्वकालको कुरा हो । एकपटक देवराज इन्द्रले महर्षि दध्यङ् आथर्वण समक्ष गएर आत्मज्ञान सम्बन्धी शिक्षा पाउन आग्रह गरे । महर्षिले आगन्तुकतर्फ हेर्दैनहेरी भने– ‘शिक्षा त दिउँला नै पहिले यो त बताऊ कि को हौ र कहाँबाट आएका हौ ?’ महर्षिको कुरा सुनेर देवर...
....त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले बिसे नगर्चीको साथ कहिल्यै छाडेनन् access_timeचैत १७, २०७८
‘जदौ महाराज !’ ‘भन् बिस्या ! किन आइस् ।’ ‘एउटा कुरा सोध्न्या मनसुवा थिया महाराज !’ ‘भन् न बिस्या ! के कुरा हो ।’ ‘सरकार चिन्तित भइस्या देख्याछु नि हो ?’ ‘हो, बिस्या ! ठीकै अनुमान लगा...
प्रेरक भनाइ : मानिस प्रकृतिको त्यस्तो उपहार हो, जहाँ अनन्त शक्ति लुकेको छ access_timeचैत १५, २०७८
१, चाहे शासनसत्ताको कुरा गरौँ चाहे अरू नै कुनै काम लिङ्ग तथा वर्ण हेरेर भावना बनाउनुहुँदैन । अन्यथा सामाजिक वैमनस्यको स्थिति निम्तिन सक्छ । मात्र अवसर पाउनुपर्छ तोकिएको काम सम्पन्न गर्न सबै सक्षम छन्, गर्न सक्छन् । ल्पेटो २, घृणा र तिरस्कारबाट बच्न चाहनेले कठोर बोली र व...
पुस्तक चर्चा : मैले बाँचेको ‘उत्सुकता’को जीवन access_timeचैत ५, २०७८
बालबालिकालाई लक्षित गरी लेखिएको सरिता परियारको बालकथा संग्रह ‘उत्सुकता’ले जो कोहीको झन् उत्सुकता बढाई दिन्छ कि यो कस्तो विषयको पुस्तक होला भनेर । यो चित्रमय किताब बालबालिका लागि मात्र नभई हरेक उमेर र वर्गका लागि पनि ज्ञानवद्र्धक र प्रेरणादायी पुस्तक हुन सक्...
प्रेरक प्रसङ्ग : मूल्य वस्तुको होइन विशेषताको हुन्छ access_timeफागुन २२, २०७८
एकपटक विश्वविख्यात वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसन रेल गाडीबाट कतै जाँदै थिए । गाडी चलिरहेको थियो उनी कुनै पुरानो धार्मिक पुस्तक पढ्नमा व्यस्त । उनको तल्लीनता देखेर नजिकै बसेका सज्जनले सोधे– ‘महाशय ! देख्दैछु निकै पहिलेदेखि पढ्नमा तल्लीन हुनुहुन्छ, कुन पुस्त...
प्रेरक प्रसङ्ग : ‘समाजका लागि बाँच्नेहरू मरेर पनि बाँचिरहेका हुन्छन्’ access_timeफागुन १८, २०७८
१, फोस्रो इज्जत, रवाफ र धाक लगाएर हिड्नु भनेको आफैँलाई ठग्नु हो । योभन्दा निन्दनीय काम अर्को हुँदैन । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा २, जोजो मानिस असल छन् उनीहरूसँग असल व्यवहार गर्नुपर्छ । जोजो मानिस असल छैनन् उनीहरूसँग पनि असलै व्यवहार गर्नुपर्छ । ताकि असल कुरा सबै ठा...
दाङमा एमाले स्थानीय तह गुमाउँदै, काँग्रेस र माओवादी थप्दै